Madaxweynaha Somaliland iyo weftigiisii Oo maanta Dalka Ku soo Laabtay – WARSOOR
Madaxweynaha Somaliland iyo weftigiisii Oo maanta Dalka Ku soo Laabtay
Hargeysa – (warsoor) – Madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Siilaanyo iyo wefti balaadhan oo isugu jiray gudoomiyaha Kulmiye Muuse Biixi iyo xubno Golaha wasiiradda ah ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa.
Dadweyne aad u tiro badan ayaa isa soo tubay agagaarka madaarka Hargeysa iyo badhtamaha Suuqa dhexe. Dadweynaha oo ku labisnaa astaanka xisbiga Kulmiye ayaan caleemo qoyan ku soo dhaweyey madaxweynaha iyo weftigiisa.
Ciidamadda Amaanka ayaa lagu teeday hareeraha wadda weyn ee ka soo hor marta madaxtooyadda ilaa madaarka Cigaal international.
Halkan ka daawo muuqaalka Soo dhawaynta madaxweynaha Somaliland iyo weftigiisa.
Gudoomiye Xisbul Xaakimka KULMIYE Oo Xaflad Sagootin ah Loogu Qabtay London
Maamul Goboleedka Cusub ee Hirshabeel oo Doortay Madaxweyne iyo Ku-xigeenkiisa